Voka-pifidianana: mifantoka eny amin’ny HCC ny mason’ny rehetra | NewsMada
Voka-pifidianana: mifantoka eny amin’ny HCC ny mason’ny rehetra
Hanao ahoana ny ho voka-pifidianana ofisialy havoakan’ny HCC ? Mifantoka amin’izany ny mason’ny rehetra. Tsy azo ivalozana ny didim-pitsarana hivoaka eo.
Na ny vahoaka, na ny mpanao politika, na ny kandidà sy ny mpomba azy avy; eny, na ny mpanohitra ny voka-pifidianana sy ny fifidianana aza: samy miandry sy tsy mandry avokoa. Hisy ve ny fiovana amin’ny fotoana farany?
Samy manana ny tombantombany…
Tsy mitovy ny “logiciel” ampiasain’ny HCC sy ny Ceni. Hanao ahoana ny ho fivoaran’ny raharaha amin’izany?
Misy ny mitompo teny fantatra aza fa tsy maintsy hatao ny fihodinana faharoa. Tsy hiova firy ny voka-pifidianana, na tafakatra 200 mahery aza ny fitoriana ary nanatsoaka ny azy ny kandidà Ravalomanana. Efa mahazatra ny fitovitovian’ny voka-pifidianana vonjimaika sy ny ofisialy.
Fanitsiana miainga amin’ny fitoriana voarainy no ataon’ny HCC. Eo koa ny mety hamerenany ny fanisam-bato. Manana ny firaketana an-tsoratra (PV) ny HCC, ary manana ny azy ny Ceni. Mety tsy hitovy? Mety hanaovana fampitahana ny voka-pifidianana, ary mety hampitsimbadika izany.
Hafanafana ny aorian’ny voka-pifidianana
Aorian’ny voka-pifidianana, haresaka indray ny politika. Ho hafa, ohatra, ny fandehan’ny raharaha, raha tsy misy ny fihodinana faharoa.
Hangotraka kosa ny fampielezan-kevitra amin’ny fihodinana faharoa fa hisy ny fanilihana kandidà: fanilihana tsy tiana hitondra no hifidianana kandidà iray mpifaninana aminy; eny, na ny mety tsy tiana aza, fidina tsy fidiny. Ho maro, noho izany, ny mpandatsa-bato.
Araka izany, mifantoka eny Ambohidahy ny mason’ny rehetra. Samy miantso fitoniana ny fitondrana, ny fiangonana, ny firaisamonina sivily, ny iraisam-pirenena… Ny tsirairay ihany no erany, na hikorontana na tsia?